हावा फार्मको निर्माणमा संलग्न सबै हरियो नवीकरणीय
हावा फार्मको निर्माणमा संलग्न सबै
के तपाईंले कहिल्यैaदेख्नुभएको छ? eologo पार्क funcionando। हावा टर्बाइनहरू र यसको ब्लेडहरू गतिशील र ऊर्जा उत्पादन गर्दै। यद्यपि यी सबै पछि, हावाहरू, हावा टर्बाइनहरूको स्थिति, आवश्यक शक्ति, इत्यादिको अध्ययन गर्दछ। यस पोष्टमा हामी चरण-पछि चरणको सबै चीजहरू देख्नेछौं जुन तपाईंलाई हावा फार्मको निर्माणको बारेमा जान्नु आवश्यक छ।
के तपाईं हावाबाट बिजुली उत्पादन सम्मिलित हुने सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
1 हावा मापन
2 क्षेत्र मापन
3 पार्कको प्रदर्शनको हिसाब
4 हावा फार्मको निर्माण हुनुभन्दा पहिले चरण
5 भवन तत्वहरू
6 हावा फार्मले के मर्मत कार्य गर्दछ?
हामी स्पष्ट रूपमा कुरा गर्दैछौं हावा ऊर्जा, त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो अध्ययन कि गरेको काम हावामा हो। यो वायु शासन जान्नु आवश्यक छ जुन हावा फार्म निर्माण हुने क्षेत्रमा चल्छ। यो केवल प्रचलित हावाको प्रकार थाहा पाउनु महत्वपूर्ण छैन, तर गति र यसको आवृत्तिको साथ।
हावा नाप्न प्रयोग गरिएको समय परियोजनाको उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ। मापन सामान्यतया एक वर्ष मापन गर्दछ। यस तरिकाले, उनीहरूले वर्षको केहि भाग नखोज्ने अनिश्चिततालाई वेवास्ता गर्छन् र यसैले डाटामा बढी विश्वास हुन्छ।
हावा मापन गर्न तपाईंलाई प्रशिक्षित टोली चाहिन्छ। अधिक आयामको साथ केहि प्यारामिटरहरू जान्न यो विभिन्न उचाइमा स्थापना गरिएको छ। सब भन्दा सामान्य मापन गरिएको स्थिति ब्लेड टिप, मिडरेंज, र हब उचाई हो। यी तीन बिन्दुहरूको साथ, हावा मानहरू अधिक सही र हावा फार्मको निर्माणको लागि उपयोगी छन्। एक पटक मापन टावर र मस्तुल तयार भएपछि, नाप्ने ठाउँ राखिन्छ। यो सामान्य रूपमा भ्यारीएबल उपकरणहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ एनिमोमीटर, हाइग्रोमीटर, भ्यान, थर्मामिटर र ब्यारोमिटरहरू।
तपाइँले उपलब्ध बजेटमा निर्भर गर्दै, हावा फार्मले गर्न सक्ने कुल आकारलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। यो सम्भव छ कि हामी राम्रो हावा प्रणालीसहितको ठूलो क्षेत्र भेट्टाउनेछौं जसले पार्कमा राम्रो फिर्ती दिन्छ, तर काम पूरा गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरू छैनन्। त्यसकारण यो आवश्यक छ योजना गरिएको क्षेत्रहरूको आयाम जान्नुहोस् प्रोजेक्टको निर्माण योजना, उपलब्ध सतह, भूभाग र स्थलाकृतिहरू र विन्ड टर्बाइनहरूका केही सम्भावित मोडेलहरू जुन तपाईंले स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
यी प्यारामिटरको आधारमा, हामीले ठाउँहरू सेट गर्नु पर्छ जहाँ मास्ट राखिन्छ। हावा फार्मको निर्माणमा, एक विशेषज्ञ सल्लाहकार उपस्थित हुनुपर्दछ। यो किनभने यो मास्टको स्थान र तिनीहरूको कन्फिगरेसन राम्रोसँग परिभाषित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा हामीसँग रहेको हावा स्रोतहरू नाप्न मद्दत गर्ने मस्तको लगानी। थप रूपमा, तपाईंलाई यी मापनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको नियम र मापदण्डको अनुरूप हुन आवश्यक छ।
डेटा वर्ष मा मापन गरिएको छ रूपमा, यो मापन को ट्र्याक राख्न महत्वपूर्ण छ। जे भए पनि मास्ट मापदण्ड अनुसार स्थापित छ, त्यहाँ केहि प्रकारको समस्या हुन सक्छ जुन मर्मत गर्न आवश्यक छ। यदि समस्या द्रुत रूपमा समाधान भएन भने, हामीसँग गलत मापनको साथ अवधि हुनेछ जुन त्रुटिका लागि नेतृत्व गर्दछ।
पार्कको प्रदर्शनको हिसाब
हावा फार्ममा प्रदर्शन हुन्छ कि छैन भनेर गणना गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण, धेरै कारकहरू विचार गर्न आवश्यक छ। ती मध्ये एक अभियानको दौरान हावाका स्रोतहरूको सही मापन हो।
एक पटक मापन अभियान पूरा भएपछि, काम गर्न डाटाबेस प्राप्त हुन्छ। तपाईं पार्कको नाममात्र उर्जा, वायु टर्बाइनको विशेषताहरू, भूमिको स्थलाकृति, इत्यादि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। वायु फार्म उत्पादन को गणना गर्न प्राप्त डेटा मा एक अधिक अनुकूलित वितरण पनि गर्न सकिन्छ। यी डाटाको साथ तपाईं प्रदर्शन जान्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंसँग प्रासंगिक कार्यहरू पूर्ण भए पछि हुनेछ।
यस चरणमा प्रदर्शन गणना सहायक स्थापनाहरूसँग सम्बन्धित विद्युतीय नोक्सानलाई ध्यान दिदैन। पार्कको प्रयोगको समयमा कहिलेकाँही समस्याहरू खडा हुन्छन् जसले प्रदर्शन कम गर्दछ। यद्यपि यो भविष्यवाणी गर्न सकिदैन। कति पटक र कति पटक समस्याहरू हुन्छन् जसले प्रदर्शनलाई कम गर्छ भन्ने गणना गर्न सकिदैन।
हावा फार्मको निर्माण हुनुभन्दा पहिले चरण
हावा फार्मको निर्माण हुनुभन्दा पहिले चरणमा, यसको बारेमा राम्ररी जानकारी दिन आवश्यक छ वित्त पोषण र मूल्यहरू (CAPEX) को बारेमा बजार सर्तहरू। उदाहरण को लागी, डम्प गर्न आवश्यक ईन्जिनियरिंग रोजगार को साइट को एक बेहतर समझ हुनु पर्छ। थप रूपमा, ईन्जिनियरिंग मामिलाहरूमा प्राविधिक समाधानहरू छन् र अनिश्चिततासँग सम्बन्धित केहि जोखिमहरू छन् जुन विश्लेषण गरिनु पर्छ। यी सबै डाटा हावा फार्मको अन्तिम लगानीमा देखा पर्दछ।
हावा फार्मको सफलताको सम्भावनाको गहिराइमा जान्न, कन्डिसन भ्यारीएबलको सूची जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी चलहरूमा हामी भू-भौगोलिक र भू-तकनीकी अवस्था, वातावरणीय, कानुनी र क्षेत्रीय व्यवहार्यता पाउँछौं। हावा फार्ममा दुबै भूमि र पोर्टहरू मार्फत पहुँचको विश्लेषण गर्न र नेटवर्कको पहुँच सर्तहरू पनि जान्न यो सम्भव छ।
तसर्थ, यी सबै प्रकारको प्रोस्पेटि and गर्ने र सर्वेक्षण गर्ने काम गर्न आवश्यक छ। लगातार भूकम्प गतिविधिका साथ साइटको तुलनामा मानक इलाकामा निर्माण गर्नु उस्तै हुँदैन।
पार्कको निर्माण कार्य गर्दा, त्यहाँ शक्तिमा आधारित विचार गर्न भिन्नताहरू छन्। थप रूपमा, यो कि तिनीहरू दलदल वा चट्टानी क्षेत्रहरू र वायु टर्बाइनहरूको आकारमा निर्भर गर्दछ।
पहिलो काम सिभिल (प्लेटफर्म, जग र सडक) हो। यो काम प्राय:4र १२ महिनाको बीचमा लिन सक्दछ। त्यसो भए नेटवर्कमा जडान गर्न निर्माण सुरू हुन्छ। यो अंश सामान्यतया यसको जटिलताको आधारमा लामो लिन्छ। तिनीहरू प्राय: and र १ months महिनाको बीचमा लिन्छन्। अन्तमा, सिभिल कार्यहरू समाप्त हुन थाल्दा, हावा टर्बाइनहरू ल्याइन्छ र भेला हुन्छन्। तिनीहरूको आकार र पार्कको आकारमा निर्भर गर्दै, यसले १२ र २ months महिनासम्म लिन सक्दछ।
हामीलाई कति जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर जान्नको लागि हामीले पार्कको आकार राम्रोसँग जान्नुपर्दछ। एक wind० वारा टर्वाइनको साथ 350 XNUMX० मानिसहरूले निर्माण गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंसँग wind वारा टर्वाइनहरू छन् भने तपाईंलाई 5० जना मात्र चाहिन्छ।
हावा फार्मले के मर्मत कार्य गर्दछ?
वायु फार्ममा हावा टर्वाइनहरू मात्र समावेश गर्दैन, सम्पूर्ण स्थापनाको मर्मत आवश्यक छ। मर्मत कार्यहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित लागतहरू पार्कको आकार र सुविधाहरूको डिजाइनमा निर्भर हुन्छ। निर्माण चरणमा उच्च गुणस्तर, कम मर्मत लागत।
सन्दर्भ प्राप्त गर्न, लगभग -०-30० हावा टर्बाइनहरूको हावा फार्म यो people जना (दुई प्रति वायु टर्बाइन), अर्ध-वार्षिक रखरखाव, एक सामान्य सुपरवाइजर, र एक वा दुई व्यक्तिलाई उत्पादन प्लान्टको संचालनका लागि खटाइएको खण्डमा नियुक्त गरिएको अन्य २ देखि people जनाले राख्न सक्दछन्।
यस जानकारीको साथ, म आशा गर्दछु कि हावा फार्महरू र उनीहरूले पूरा गरेको कामको बारेमा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा जान्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » वायु शक्ति » हावा फार्मको निर्माणमा संलग्न सबै
डा। लुइस मोन्जोन भन्यो
शुभ दिन। १०० मेगावाटको हावा टर्वाइनको लागि कति जडान चाहिन्छ?
डा। लुइस मोन्जोनलाई जवाफ दिनुहोस्
Darci दाल लगाए भन्यो
मसँग उपाय छन्, मलाई सल्लाह र सम्पर्क चाहिन्छ मेरो हावा परियोजना जारी राख्न
Darci दाल ponte जवाफ
ग्यासको क्यालोरिफिक पावरको परिभाषा, उपयोगिता र मापन
वैकल्पिक उर्जा जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ